सप्तरीमा दुई फिटसम्म असिना खस्यो, गहुँबाली र आँप नष्ट. – Sabaikoaawaj.com
सप्तरीमा दुई फिटसम्म असिना खस्यो, गहुँबाली र आँप नष्ट.
सोमवार, चैत्र ७, २०७३ 9:40:56 PM	मा प्रकाशित
सप्तरी,७ चैत/ सप्तरीमा वर्षासँगै भारी असिना परेको छ । यसले सप्तरीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । जिल्लाको पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा असिना खसेको छ ।
यस्तै किसानहरुले लगाएको मुँगको दाल, बिभिन्न किसिमका तरकारीसहितका बालीहरु पनि असिनाले नष्ट गरेको छ
प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र ७, २०७३ 9:40:56 PM